သမီးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုရင် ဒီအချက်တွေကို မဖြစ်မနေသင်ကြားပေးပါ…..
13 Feb 2018 . 12:44 PM
သားသမီးလေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ဘဝခရီးလမ်းလှပဖို့အတွက် မိဘတိုင်းက လမ်းညွှန်သင်ကြားပြသပေးရမှာပါ။ လူကြီးမိဘမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ ဆိုဆုံးမမှုအောက်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့ ရင်သွေးငယ်ကလေးတွေက ဘဝခရီးလမ်းကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားသိပြီး အခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံး ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေက သားသမီးတွေအတွက် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်စာရိတ္တ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဖြစ်လာအောင် ထိန်းကျောင်းသင်ကြားပြသပေးရမှာပါ။ သားယောက်ျားလေးနဲ့ယှဉ်ရင် သမီးမိန်းကလေးတွေက အားနွဲ့တတ်ကြပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် သမီးမိန်းကလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မိဘဖြစ်သူတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကိုပဲ မိဘရိပ်အောက်မှာ ပညာရည်ပြည့်ဝပြီး အလိမ္မာဆုံးဖြစ်မယ့် သမီးကလေးတွေဖြစ်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သမီးမိန်းကလေးတွေဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေသင်ကြားပြသပေးရမှာက လှပတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့နဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို ဘယ်လိုမျိုးကြံ့ကြံ့ခံလျှောက်လှမ်းသွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ကြားပြသပေးသင့်သလို အခြားသောဘယ်လိုအချက်အလက်တွေကိုလည်း သင်ကြားပြသပေးသင့်သလဲဆိုတာကို သမီးမိန်းကလေးတွေမွေးထားတဲ့ မိဘတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်ဖို့ သမီးလေးကို သင်ပေးပါ။
လောကကြီးမှာ ကိုယ့်လောက်တော့ ဘယ်သူကမှ ကိုယ့်ကိုမချစ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မိမိကိုယ်ကို အရင်ဆုံးချစ်တတ်အောင် သင်ပေးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ လက်ခံတတ်ဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ရှိရင်းတိုင်းကို လက်ခံတတ်ဖို့၊ မြင်တတ်ဖို့ သင်ကြားပေးပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တယ်ဆိုတာ အတ္တကြီးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်အသိဆုံးနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်နားလည်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် သိဖို့ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်တတ်မယ် ဂရုစိုက်တတ်မယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် စိတ်အားငယ်ရတဲ့အချိန်တိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်အားပေးပြီး ပြန်ထဖို့လိုမယ်ဆိုတာကို သမီးလေးကို သင်ပေးထားပါ။
ရှင်သန်နေထိုင်မှုနဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်မှုကို အမြဲသိနေပါစေ။
သမီးလေးဘဝမှာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ပြီး ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်အထိ ဘယ်လိုရှင်သန်ခဲ့ရလဲဆိုတာ သမီးလေးကို သိအောင်လုပ်ပေးထားပါ။ အနာဂတ်အချိန်တွေမှာ သမီးလေးရဲ့ ဘယ်လိုရည်မှန်းချက်တွေရှိသလဲ။ ဘယ်လိုအိပ်မက်တွေရှိနေသလဲဆိုတာလည်း သမီးကလေးကို တွေးတောပုံဖော်နေပါစေ။ ရည်မှန်းချက်ရှိထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်တော့မှလမ်းပျောက်မှာမဟုတ်လို့ပါ။ ဒီတော့ သမီးလေးဆီမှာလည်း အိပ်မက်တွေ အများကြီး တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းလဲနေချင်လည်းပြောင်းလဲနေမှာပါ။ သူရဲ့အိပ်မက်တွေကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်အောင် ကြိုးစားမလဲ။ ဘယ်လိုသင်ယူမှုတွေလုပ်မလဲဆိုတာ မိဘတွေက ကောင်းရာဆိုးရာတွေကို လမ်းကြောင်းပြသပေးပြီး အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးထိန်းကျောင်းမှုတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။
လောကကြီးကို ဖြန့်ကျက်ပြီး ကြည့်ရှုတတ်ပါစေ။
သမီးလေးရဲ့အမြင်နဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီး မြင်ကြားသိရှိနိုင်ပါစေ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာတတ်စေဖို့၊ အကောင်းအဆိုးတွေကို ကိုယ်တိုင်သိရှိလေ့လာတတ်စေဖို့၊ အသစ်အသစ်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို ဖြန့်ကျက်ပြီး သမီးလေးကို လောကကြီးအကြောင်း သင်ယူဖို့ ခွင့်ပြုပေးထားပါ။ လမ်းကြောင်းမမှားဖို့ အတတ်ပညာတွေနဲ့ အသိပညာဗဟုသုတွေ၊ မိဘတွေရဲ့ဆိုဆုံးမမှုတွေက သမီးကလေးအနာဂတ်အတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်နေပါစေ။ ခရီးသွားခိုင်းပါ။ လူတစ်ယောက်အတွက် ခရီးသွားခြင်းက ကမ္ဘာကြီးကပေးတဲ့ အခွင့်အရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်သလိုပါပဲ။
လူတွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေး တည်ဆောက်ပေးခိုင်းပါ။
မုန်းခြင်းတွေထက်စာရင်၊ ချစ်ခြင်းတွေက ပိုကောင်းမွန်တယ်မို့လား။ ဒါကြောင့် လူတွေရဲ့အချစ်ခံရအောင်၊ လူတိုင်းနဲ့ ကောင်းမွန်ပြေလည်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို သမီးကလေး တည်ဆောက်တတ်ဖို့ သင်ကြားပြသပေးပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက သမီးလေးကိုချစ်ခင်နေဖို့၊ လေးစားနေဖို့၊ ယုံကြည်နေဖို့အတွက် သမီးလေးရဲ့အကျင့်စရိုက်၊ အမူအယာ၊ အပြောအဆို၊ အသွားအလာနဲ့ စိတ်ထားတွေမှာ လူတွေကချစ်ခင်အောင်နေတတ်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောပြပါ။ ဒါမှလည်း သမီးလေးက လူတွေအ ပေါ် ပြန်ပြီး ချစ်တတ်ခင်တတ်၊ ကြင်နာတတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ အမြဲပြုံးပျော်ရွှင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသူတွေကိုရော၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော ခွင့်လွှတ်တတ်ဖို့ သင်ပေးပါ။
ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာ မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေမှာပဲ ရှိတာပါ။ အမှားလုပ်လိုက်မိလို့ ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့သူက စိတ်အေးချမ်းရဆုံးဖြစ်မှာပါ။ လူတိုင်းက အမှားတွေကျူးလွန်နိုင်ပါတယ်။ သမီးလေးမှာလည်း အမှားတွေရှိခဲ့မှာပါ။ အမှားတွေကို အပြစ်တင်ဝေဖန်ရင်း အချိန်တွေကုန်ဆုံးတာက လူညံ့တွေရဲ့အလုပ်တွေပါ။ အမှားတစ်ခါကျူးလွန်တိုင်း တစ်ခါသင်ယူမှုတစ်ခုရတယ်လို့ ယူဆပြီး နောက်ဆင်တူတဲ့ အမှားမျိုးမကျူးလွန်မိအောင် သမီးလေးကိုပြောပေးပါ။ အမှားလုပ်မိလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း ခွင့်လွှတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကိုလည်း မွေးမြူခိုင်းပါ။ အခြားသူတွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ အမှားတွေအတွက် သဘောထားမြင့်မြတ်စွာနဲ့ ခွင့်လွှတ်ပေးခိုင်းပါ။
သမီးလေးတှေ ပိုငျဆိုငျထားပွီဆိုရငျ ဒီအခကျြတှကေို မဖွဈမနသေငျကွားပေးပါ…..
သားသမီးလေးတှရေဲ့ အနာဂတျဘဝခရီးလမျးလှပဖို့အတှကျ မိဘတိုငျးက လမျးညှနျသငျကွားပွသပေးရမှာပါ။ လူကွီးမိဘမိဘဆရာသမားတှရေဲ့ ဆိုဆုံးမမှုအောကျမှာ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျနဲ့ကွီးပွငျးလာတဲ့ ရငျသှေးငယျကလေးတှကေ ဘဝခရီးလမျးကို ဖွတျသနျးတဲ့အခါ အမှားအမှနျကို ခှဲခွားသိပွီး အခကျအခဲတှကေို အကောငျးဆုံး ကွံ့ကွံ့ခံရငျဆိုငျဖွတျသနျးသှားနိုငျကွမှာလညျးဖွဈပါတယျ။ မိဘတှကေ သားသမီးတှအေတှကျ အသိပညာ၊ အတတျပညာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အကငျြ့စာရိတ်တ၊ ကိုယျကငျြ့တရားကောငျးမှနျတဲ့သူတှဖွေဈလာအောငျ ထိနျးကြောငျးသငျကွားပွသပေးရမှာပါ။ သားယောကျြားလေးနဲ့ယှဉျရငျ သမီးမိနျးကလေးတှကေ အားနှဲ့တတျကွပါတယျနျော။ ဒါကွောငျ့ သမီးမိနျးကလေးတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မိဘဖွဈသူတှအေတှကျတော့ တကယျ့ကိုပဲ မိဘရိပျအောကျမှာ ပညာရညျပွညျ့ဝပွီး အလိမ်မာဆုံးဖွဈမယျ့ သမီးကလေးတှဖွေဈအောငျ ပွုစုပြိုးထောငျပေးဖို့လိုအပျပါတယျ။ သမီးမိနျးကလေးတှဆေိုရငျတော့ မဖွဈမနသေငျကွားပွသပေးရမှာက လှပတဲ့စိတျထားရှိဖို့နဲ့ ဘဝခရီးလမျးကို ဘယျလိုမြိုးကွံ့ကွံ့ခံလြှောကျလှမျးသှားကွမလဲဆိုတာနဲ့ပတျသကျပွီး သငျကွားပွသပေးသငျ့သလို အခွားသောဘယျလိုအခကျြအလကျတှကေိုလညျး သငျကွားပွသပေးသငျ့သလဲဆိုတာကို သမီးမိနျးကလေးတှမှေေးထားတဲ့ မိဘတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ….
ကိုယျ့ကိုကိုယျခဈြတတျဖို့ သမီးလေးကို သငျပေးပါ။
လောကကွီးမှာ ကိုယျ့လောကျတော့ ဘယျသူကမှ ကိုယျ့ကိုမခဈြကွပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ မိမိကိုယျကို အရငျဆုံးခဈြတတျအောငျ သငျပေးပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြတှေ လကျခံတတျဖို့၊ ကိုယျ့ရဲ့ရှိရငျးတိုငျးကို လကျခံတတျဖို့၊ မွငျတတျဖို့ သငျကွားပေးပါ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျခဈြတယျဆိုတာ အတ်တကွီးတာမြိုးမဟုတျပဲ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျအသိဆုံးနဲ့ ကိုယျ့စိတျကို ကိုယျနားလညျနိုငျဆုံးဖွဈအောငျ သိဖို့ပါ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျခဈြတတျမယျ ဂရုစိုကျတတျမယျဆိုရငျ ပြျောရှငျမှုကို ကိုယျတိုငျဖနျတီးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ စိတျအားငယျရတဲ့အခြိနျတိုငျး ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျအားပေးပွီး ပွနျထဖို့လိုမယျဆိုတာကို သမီးလေးကို သငျပေးထားပါ။
ရှငျသနျနထေိုငျမှုနဲ့ ရညျရှယျခကျြ ဦးတညျမှုကို အမွဲသိနပေါစေ။
သမီးလေးဘဝမှာ ကိုယျ့ခွထေောကျပျေါကိုယျရပျတညျပွီး ကွီးပွငျးလာတဲ့အခြိနျအထိ ဘယျလိုရှငျသနျခဲ့ရလဲဆိုတာ သမီးလေးကို သိအောငျလုပျပေးထားပါ။ အနာဂတျအခြိနျတှမှော သမီးလေးရဲ့ ဘယျလိုရညျမှနျးခကျြတှရှေိသလဲ။ ဘယျလိုအိပျမကျတှရှေိနသေလဲဆိုတာလညျး သမီးကလေးကို တှေးတောပုံဖျောနပေါစေ။ ရညျမှနျးခကျြရှိထားတဲ့လူတဈယောကျဟာ ဘယျတော့မှလမျးပြောကျမှာမဟုတျလို့ပါ။ ဒီတော့ သမီးလေးဆီမှာလညျး အိပျမကျတှေ အမြားကွီး တဈခုပွီးတဈခု ပွောငျးလဲနခေငျြလညျးပွောငျးလဲနမှောပါ။သူရဲ့အိပျမကျတှကေို ဘယျလိုအကောငျအထညျဖျောအောငျ ကွိုးစားမလဲ။ ဘယျလိုသငျယူမှုတှလေုပျမလဲဆိုတာ မိဘတှကေ ကောငျးရာဆိုးရာတှကေို လမျးကွောငျးပွသပေးပွီး အကောငျးဆုံး ပံ့ပိုးထိနျးကြောငျးမှုတှေ လုပျသငျ့ပါတယျ။
လောကကွီးကို ဖွနျ့ကကျြပွီး ကွညျ့ရှုတတျပါစေ။
သမီးလေးရဲ့အမွငျနဲ့ စိတျထှကျပေါကျတှကေို လှတျလှတျလပျလပျကွီး မွငျကွားသိရှိနိုငျပါစေ။ ပတျဝနျးကငျြကို လလေ့ာတတျစဖေို့၊ အကောငျးအဆိုးတှကေို ကိုယျတိုငျသိရှိလလေ့ာတတျစဖေို့၊ အသဈအသဈသော ပတျဝနျးကငျြတှကေို ဖွနျ့ကကျြပွီး သမီးလေးကို လောကကွီးအကွောငျး သငျယူဖို့ ခှငျ့ပွုပေးထားပါ။ လမျးကွောငျးမမှားဖို့ အတတျပညာတှနေဲ့ အသိပညာဗဟုသုတှေ၊ မိဘတှရေဲ့ဆိုဆုံးမမှုတှကေ သမီးကလေးအနာဂတျအတှကျ အထောကျအပံ့ဖွဈနပေါစေ။ ခရီးသှားခိုငျးပါ။ လူတဈယောကျအတှကျ ခရီးသှားခွငျးက ကမ်ဘာကွီးကပေးတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျသလိုပါပဲ။
လူတှနေဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ဆကျဆံရေး တညျဆောကျပေးခိုငျးပါ။
မုနျးခွငျးတှထေကျစာရငျ၊ ခဈြခွငျးတှကေ ပိုကောငျးမှနျတယျမို့လား။ ဒါကွောငျ့ လူတှရေဲ့အခဈြခံရအောငျ၊ လူတိုငျးနဲ့ ကောငျးမှနျပွလေညျတဲ့ ဆကျဆံရေးကို သမီးကလေး တညျဆောကျတတျဖို့ သငျကွားပွသပေးပါ။ ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေ သမီးလေးကိုခဈြခငျနဖေို့၊ လေးစားနဖေို့၊ ယုံကွညျနဖေို့အတှကျ သမီးလေးရဲ့အကငျြ့စရိုကျ၊ အမူအယာ၊ အပွောအဆို၊ အသှားအလာနဲ့ စိတျထားတှမှော လူတှကေခဈြခငျအောငျနတေတျဖို့ လိုအပျတယျဆိုတာပွောပွပါ။ ဒါမှလညျး သမီးလေးက လူတှအေ ပျေါ ပွနျပွီး ခဈြတတျခငျတတျ၊ ကွငျနာတတျတဲ့ စိတျထားနဲ့ အမွဲပွုံးပြျောရှငျနမှောဖွဈပါတယျ။
အခွားသူတှကေိုရော၊ ကိုယျ့ကိုကိုယျရော ခှငျ့လှတျတတျဖို့ သငျပေးပါ။
ခှငျ့လှတျခွငျးဆိုတာ မွငျ့မွတျကွီးကယျြတဲ့ စိတျထားပိုငျရှငျတှမှောပဲ ရှိတာပါ။ အမှားလုပျလိုကျမိလို့ ခှငျ့လှတျနိုငျတဲ့သူက စိတျအေးခမျြးရဆုံးဖွဈမှာပါ။ လူတိုငျးက အမှားတှကြေူးလှနျနိုငျပါတယျ။ သမီးလေးမှာလညျး အမှားတှရှေိခဲ့မှာပါ။ အမှားတှကေို အပွဈတငျဝဖေနျရငျး အခြိနျတှကေုနျဆုံးတာက လူညံ့တှရေဲ့အလုပျတှပေါ။ အမှားတဈခါကြူးလှနျတိုငျး တဈခါသငျယူမှုတဈခုရတယျလို့ ယူဆပွီး နောကျဆငျတူတဲ့ အမှားမြိုးမကြူးလှနျမိအောငျ သမီးလေးကိုပွောပေးပါ။ အမှားလုပျမိလို့ ကိုယျ့ကိုကိုယျလညျး ခှငျ့လှတျသငျ့တယျဆိုတဲ့ စိတျကိုလညျး မှေးမွူခိုငျးပါ။ အခွားသူတှမှောလညျး ဒီလိုပါပဲ။ အမှားတှအေတှကျ သဘောထားမွငျ့မွတျစှာနဲ့ ခှငျ့လှတျပေးခိုငျးပါ။